Hiaina tetezamita tsy misy tohana amin'ny fitantanana ny fanananao
Ny rafitra mihetsika dia tsy mahafinaritra mihitsy. Betsaka ny angona azo ampitaina, ary maro amin'ireo mpitantana fantsona sy PMSes no manasarotra ny fanondranana na fampidirana vaovao.
Ny fananganana fananana dia mety ho sarotra, indrindra ho an'ireo toerana misy singa marobe, satria tsy ny rafitra rehetra no manana ny hevitry ny fananana miaraka amina karazana singa samihafa ho toy ny fanangonana vondrona tsirairay. Izany dia mitarika amin'ny filàna matetika mampiditra fampahalalana dika mitovy ho an'ireo singa mitovy amin'izany.
Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ny rafitra dia tsy mamela anao hamindra ny angona tantaranao ho an'ny vahiny efa misy sy ny famandrihana teo aloha. Midika izany fa tsy afaka mihazakazaka tatitra misy dikany ianao mba hampitahana ny fahombiazan'ny orinasanao rehefa mandeha ny fotoana, ary mety hiafara amin'ny fananganana tahirin-kevitra momba ny vahininao hatrany am-boalohany ianao. Farany, mety voatery terena ihany koa ianao amin'ny famoronana tanana ny famandrihana ho avy rehetra, izay mety handany fotoana be ary mora hadisoan'ny olombelona.
Ahoana ny fomba hanampian'i Zeevou hahatratra Tetezamita tsy misy tohana?
Ao amin'ny Zeevou dia takatray ny mety hitrangan'ny rafitra mihetsiketsika sarotra, ary manolo-tena izahay amin'ny fanamorana ny fomba faran'izay betsaka araka izay tratra, ka manome Transition Seamless izahay. Izahay dia mikendry ny hahatonga ny fifindrana mankany Zeevou ho traikefa nahafinaritra, izay ampiarahana ny fiofanana sy ny tetezamita.
Rehefa misoratra anarana na manavao ny drafitra Premium, ny Patron tsirairay dia tendrena ho mpitantana fahombiazana ho an'ny mpiara-miasa. Mpitantana fahombiazan'ny mpiara-miasa dia miasa ho mpitantana kaonty ary eo hanampy amin'ny fananganana, ary koa fanontaniana na fangatahana mitohy. Ireo mpitantana ny fahombiazan'ny mpiara-miasa dia hita amin'ny alàlan'ny mailaka sy amin'ny chat WhatsApp. Ny mpiofana dia afaka mandahatra antso 1: 1 na dia manaraka ny fizotran'ny onboard aza, ary faly kokoa izahay manampy amin'ny fomba rehetra azontsika atao.
Ankoatry ny fanolorana fanampiana premium, ny ekipanay ao Zeevou dia namolavola endri-javatra maromaro ihany koa mba hampandeha tsara ny fivezivezena amin'ireo mpamatsy hafa. Ohatra, amin'ny fotoana hifandraisanao amin'ny Airbnb sy Booking.com, dia hanafatra ho azy ny famandrihana ho avy rehetra misy anao i Zeevou.
Ny famandrihana ara-tantara na famandrihana hafa avy amin'ny loharano hafa dia azo ampidirina amin'ny alàlan'ny fampidirana Bulk Booking Import. Ireo mpampiantrano dia afaka mampiditra ny angon-drakitra famandrihany rehetra ao anaty rakitra Excel ary manafatra izany ho rakitra CSV / XLSX ao amin'i Zeevou. Matetika, ny lisitry ny ankamaroan'ny fampahalalana takiana amin'izany dia azo haondrana avy amin'ireo rafitra efa misy. Ity dia miantoka fa mbola afaka miditra amin'ny angon-drakitra famandrihana tantara ianao ho an'ny tanjona amin'ny fanaovana tatitra. Ankoatr'izay, ny mombamomba ny vahiny dia noforonina ho ampahany amin'ny fizotrany, noho izany dia tsy ho very ny iray amin'ireo fampahalalana sarobidy izay ilainao ho anisan'ny CRM vahiny.
Endri-javatra iray hafa izay mahatonga ny onboarding ho mora ho an'ny orinasa lehibe fitantanana ny hofan-trano fialan-tsasatra dia ny fanangonana vondrona mitovy amin'ny sokajin-tariby, ary ny karazana unit hita amin'ny adiresy iray ihany eo ambanin'ny trano. Misoroka ny filàna mampiditra fampahalalana dika mitovy. Ho an'ny mpandraharaha hotely, aparthotel ary trano fandraisam-bahiny, dia namorona endrika famoronana singa marobe ihany koa izahay. Io dia ahafahanao mamorona ny singa rehetra ao anatin'ny karazana unit amin'ny tsindry bokotra iray, miaraka amina varavarana mitombo isa ho an'ny singa tsirairay.
Zeevou koa dia tonga preloaded miaraka amina maodely maodely marobe ary fitsipika mitarika ho an'ny mpampiantrano, vahiny ary mpiasa. Na dia azo ovaina tanteraka aza izy ireo ary azonao atao ny manangana ny maodelinao manokana ary ny fitsipiky ny fikafika azo namboarina, dia manamora kokoa ny fandehananao izany. Raha misy fangatahana manokana azafady, aza misalasala mivoaha ho antsika - hanao izay fara herinay izahay handraisana azy ireo.